I-China Series RCDE Ukuzihlanza Kokuzipholisa Kokubambisana Kwamafutha okupholisa i-Electromagnetic Separator nabahlinzeki | Luhle
Uchungechunge lwe-RCDE Lokuzihlanza Kokuzipholisa Kokubumba okwenziwe ngogesi
Isicelo: Ezitshalweni ezinkulu zamandla ophethiloli, amachweba okuhamba amalahle, izimayini zamalahle, izimayini, izinto zokwakha nezinye izindawo ezidinga ukususwa okuphezulu kwensimbi, futhi zingasebenza ngokujwayelekile ezindaweni ezinokhahlo ezinjengothuli, umswakama kanye nokugqwala okukhulu kasawoti wokufafaza usawoti.Iyona evame kakhulu indlela yokupholisa yensimu ye-electromagnetic emhlabeni.
◆ Idizayini ekhethekile ye-coil ethokozisayo, endeitudinal futhi eguqukayo, ifaneleka kakhulu ekudlulisweni kokushisa kumoyili we-transformer, yehlisa izinga lokushisa lekhoyili, futhi izinga lokushisa le-coil likhuphuka ngo-60 ° C. Kufinyelele ezingeni yemikhiqizo efanayo yakwamanye amazwe.
◆ Izinga lokufakwa kwe-coil lingaphezulu kwe-F, khetha uhlobo olusha lwamafutha okushisa aphezulu. Ukujikeleza kawoyela okunengqondo, kushesha ukujikeleza futhi kuphezulu ekusetshenzisweni kokushisa kokushisa.
◆ Ikhoyili ifakwe emanzini futhi yaphiliswa yi-epoxy resin ekhethekile, ithuthukise ukusebenza kokufakwa komshini wonke, isakhiwo esivalwe ngokuphelele, uthuli, imvula, usawoti-ukufafaza usawoti, kanye nokulwa nokugqwala.
F Amaphampu okupholisa obolile, akhulisa kakhulu indawo yokushisa ukushisa futhi alawule ngempumelelo ukwanda kokushisa.
Ngokusebenzisa inqubo yokukhiqiza yokuhlukanisa epholisa kancane ye-elekthronikhi. Umtshina ovuzayo owenziwe ngamaJalimane ukulawula ngokuphelele nokuqeda ukuvuza (ukuvuza konyaka ngonyaka kwe-5 mg kungatholakala).
Esedlule: Uchungechunge lwama-elekthronikhi we-electromagnetic olupholisa ngokwawo ochungechunge
Olandelayo: Isihlukanisi se-RCDC se-RCDC esilandelanisa abalandeli
Uchungechunge lwe-HMDC High ufanisi we-Magnetic Separator